In loo sahlo cookie for sax ah hawlgalka goobta.
345000 dadka soo booqda bishiiba
504 macaamiishu waxay ku yaalaan goobta hadda
118 walxaha iibiyay shalay
Lacagta: $ (USD)
Language: Soomaaliga	(SO)
>Business Asset Exchange | I Click!
Portal International ee iibsiga iyo iibinta ganacsiga iyo hantida ganacsiga
Sida ugu fiican ee Woodbridge Township in profitably gato ama la iibsado ganacsatada iyo hantida ee hadda jira
Post dalab sale Quick la damaanad ah
Isku day hadda!
Qiimayaasha iyo SERVICES
I CAAWI Faalooyinkooda iyo soo jeedinahooda
Website BUSINESS-ASSET.COM iyo muraayadaha kale ay ku domains maxalliga ah (oo loo yaqaan Bax) waxaa iska leh oo ka shaqeeya Business Asset Exchange GmbH (Bahnhofstrasse 54, Zürich, 8001, Switzerland).
Ka hor inta isticmaalka boggan internetka, waa in aad si taxadir leh u akhri qodobada soo socda iyo xaaladaha kaas oo ay maamulaan isticmaalka website-kan. Haddii aadan ku raacin shuruudaha soo socda, fadlan ha isticmaalin website taasi oo u daaya.
Haddii aad bilowday in ay caleenta marayo ama isticmaalaan website-ka ama qaar ka mid ah xubno ka, waxa ay ka dhigan tahay in aad si buuxda ku raacsan in xeerarkan iyo shuruudahan.
Intaas waxaa sii dheer, haddii aad rabtid in aad iibsato ama iibiso ganacsiga (iyo hantida kale ee ganacsiga) internetka, waxaad u baahan doontaa in ay ku heshiiyaan in ay ku xidhnaan by Shuruudaha iibsadaha dheeraad ah iyo / ama Shuruudaha iibiyaha ee (hoos ayaa lagu sharxay).
Website-kani waxaa marti ee Germany. Dhammaan booqashooyinka ah in website-kan waxaa lagu maamulaa sharciga German.
Website waxa loogu tala galay si ganacsiga, hantida maguurtada ah, qalab, iyo / ama la wareegid lagu xayeysiin karo iib internetka. Waa inaad la xiriirtaa kaliya advertising xisbiga a internetka haddii aad leedahay danaha dhabta iibsiga oo wax la bixinayo. Ma aha in aad la xiriirtaa qof kasta oo ujeeddo kale sida sida siinta alaab aad xisbiga ama wax saddexaad ama adeegyada ama alaabada ama doonaya in ay ganacsi sinaba.
Bax ma aqbalayso masuuliyada wixii khasaaro ama waxyeello ah waxaa laga yaabaa in aad u xanuunsan sida isagoo sabab u ah isticmaalka website-ilaa khasaaraha yimaado oo ku saabsan sabab u ah iyadoo qaar ka mid been abuur ah ama anshax-xumo halis ah qayb ka mid ah Bax.
Bax ma samayn wax baaritaan ah ama dadaal ay sabab kasta dhinacyada joogo ama advertising wax alla wixii bogga internetka iyo xayaysiisyada iyo aqbali karaan wax masuuliyad ah wixi qaansheeg, kharashka, khasaaraha, kharashka ama magdhow oo sababo in si toos ah ama si aan toos ahayn, sababtoo ah wax kasta oo ficilada ay ku users oo ku salaysan wixii macluumaad ah, fikrado ama talooyin ku jira website gudahood. Intaa waxaa dheer, wax xayeysiis website ma noqoneyso dalab ku qabanaya sidaa daraadeed waxa aan u xidhi karaa iibiyaha ama Bax.
Bax ma doortaan ama u falanqeeyaan iibsanayaan jawaabaya xayeysiis ah website-ka. Iibiyaha waa inay ku wada xiriiraan oo aan wadahadal la isticmaala.
Iibsadaha ama iibiyaha kasta saamaynta heshiis ee ay Faarisiyiintu khatar gaar ah oo go'aamo u gaar ah.
Markii muddo la joogaba, Bax ururiya dukaamada iyo isticmaala macluumaad shaqsi ah laga soo ururiyey dadka booqanaya website-kan. Dhammaan ka arrinsashada macluumaadka shakhsiyeed waxaa loo sameeyaa iyadoo la raacayo sharciga hadda jira German Ilaalinta Macluumaadka. Fadlan akhri Siyaasada u gaarka ah wixii faahfaahin ah ee ururinta iyo isticmaalka macluumaadka shakhsi oo aad u helaan iyo xuquuqda la saxo si wixii macluumaad kugu saabsan.
Hypertext iyo Kukiyada
Halkee website waxay la xidhiidhaa website kasta oo ay maamusho cid aan shaqo ku Bax aqbala aanay masuuliyad ka liability shaac ixtiraam kasta oo ka kooban, macluumaad ama macaamil ama ka fuliyeen on website oo kale. Joogitaanka link a boggayaga internetka waa mid aan la arko in aad talo ama ansaxiyo website sida ay Bax.
Xuquuqaha aan maadiga ahayn
Dhamaan xuquuqda hantida aqooneed ee ku saabsan website-kan, oo ay ku jiraan wax kasta oo alaabooyinka isticmaalo internetka, copyright in wax kasta oo xuquuqda in wixii xog ah ee ku jira bogga internetka ee waxaa iska leh ama shati u haysta inay Bax. Lama siiyo xaq inay u adeegsato wixii xuquuq hantida aqooneed ee jira ama la xiriira website-kan haddii kale ka badan sida uu oggol yahay in kuwaas la eego isticmaalka Waxaad. Wax kasta oo suuqa kala iibsiga, iibinta, qaybinta, taranka, koobiyeynta ama beddelaad wax kasta oo wax ku jira internetka (in qayb dhan ama) gebi ahaanba la mamnuucay ahayn la qoraal oggolaansho ah ee Bax.
Jebitaanka iyo indemnity
Sida xaalad ka mid ah isticmaalka website-kan, ma ogolaan in la geliyo ama boostada wax kasta oo xad gudbo copyright, astaamaha ama xuquuqaha kale ee hantida aqooneed ee dhinac saddexaad kasta.
Waxaan xaq u leenahay in meesha laga saaro wax kasta oo aad la geliyo ama boostada website-kan gal haddii, in aannu rumaysan nahay, wax sida xad gudbo ama ay u badan tahay inay ku xadgudbaan copyright, astaamaha ama xuquuqaha kale ee hantida aqooneed ee dhinac saddexaad kasta.
Waxaan mas'uul ka si aad u hesho waxa ku jira ama sax u ah wax kasta oo wax uploaded ama posted by user kasta oo kale oo ka mid ah website ma noqon doonto.
Waxaad halkan ku heshiiyaan in ay indemnify Bax oo dhan baahida kasta oo aad heysato si magdhaw ka dhan ah dhamaan sheegashada, shuruudo, falalka, dacwad iyo burbur dhan, khasaare, kharash toos ah iyo si dadban iyo kharashka (oo ay ku jirto iyada oo aan khasaare xaddidaadda faa'iido, khasaare dhaqaale, dakhli mustaqbalka , sumcad, kaydka la filayey, sharci iyo ujrada-taliyayaal kale oo xirfadle ah ') si toos ah ama si dadban ugu xiran ku jira ee wax kasta oo wax uploaded ama posted website-kan ay fara gelin copyright, astaamaha ama xuquuqaha kale ee hantida aqooneed ee cid u gal.
Haddii aad aaminsan tahay in content ee wax kasta oo wax uploaded ama posted website sixni ku xad aad xuquuqda hantida aqooneed, fadlan noo sheeg email ama cinwaanka boostada ku qoran website-ka.
Marka la eego iibiyaha ee
Ka hor inta xayeesiinta iibinta ganacsi ama soo jiita maal-internetka waa in aad si taxadir leh u akhri Shuruudaha adeegsiga iyo gaar ahaan Afeef iyo sidoo kale shuruudaha soo socda. Haddii aadan ogolayn in aad raacdo by kuwan oo dhan, waa in aadan ku baahiyaan iibinta ganacsi (iyo / ama hanti kasta oo kale oo ganacsi) internetka.
Website-kani waa iib ah ee ganacsiga, hantida maguurtada ah, qalabka iyo / ama la wareegid. Bax aan nidaaminaya Financial Services Authority ama wax kale ee jidhka sharci-aad waa ka mamnuuc ka bixiya nooc kasta oo saamiyada, bonds, securities, mashaariic lagu maal wadareed ama wax la mid ah internetka. Fadlan la xiriir Bax ee cinwaanka boostada ama email haddii aad tahay sida ay u haddii aad u baahineysa internetka wax shaki ah.
Bax bixisaa website-kan oo aad ku helayso fursad ay ku xayaysiiyaan iibinta ganacsigaaga ama soo jiita maalgelinta. Bax ma qaado wixii baaritaan ah ama dadaal ay sabab u geliyey iibsada, iibiyaha, shirkadaha la taliyayaal ama farogelin isticmaala internetka, ama geli sharcinimada bayaanno dhigay website-ka. Bax adag talo ah in aad dadaal kasta si ay u hubiso iyo xaqiijin dalabyo si shakhsi ah ama iyada oo loo marayo la-taliyeyaasha xirfadeed ama wakiilada sameeyo.
Haddii aad la xiriirtay dhinac saddexaad oo dhex mara isticmaalka website-kan muuqata in aan san-niyad ama kuwa u dhaqmo daacaddarro ah ama si qaldan sinaba ama qofka aad xiriirada ujeeddo kale oo aan ahayn in ay ka doodaan iibka ah ee shayga aad xayaysiiyo (sida ganacsiga adeegyada ay), waxaad la xiriiri doonaa Bax ee cinwaanka boostada ama email Wajiigiisa baahinaya faahfaahin buuxda.
Waxaad ballanqaadayso in content ee xayaysiinta aad meel website-ka wuxuu noqon doonaa mid run ah oo sax ah oo halkan ku heshiiyaan in ay indemnify Bax ka dhan ah dhamaan sheegashada, shuruudo, falalka, dacwadaha, kharashka, khasaaraha, kharashka ama waxyeelada ka bixiddu laga yaabaa habase oo sababo in si toos ah ama si aan toos ahayn sida ay sabab u tahay isticmaalka of this website, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, soo shaac baxa waajibaadkaaga hoos imanaya xeerka kasta ama sharciga ku habboon si ay u wadan ay ku taalay waxaa lagu daray.
Bax xaq u leedahay inaad diido in ay geliyaan fursad ganacsi kasta (ama xayaysiinta ku saabsan ganacsi iibsashada / sale) taxay haddii aan, in fikraddii macquul ah, tixgelin listing sida in ay munaasib ahayn, been abuur ah ama haddii kale aan niyad san.
Bax xaq u leedahay inay xaalkaa liiska ganacsi kasta haddii aan, in fikraddii macquul ah, waxay aaminsan yihiin tifatirka sida hagaajin doontaa tayada website-ka. Bax ma ogola bandhigay ee faahfaahinta xiriirka iibiyaha ah ee gudaha liiska ganacsi. Dhamaan fariimaha iibsadaha waxaa loo dhiibi doonaa iibinaya bogga internetka. Bax xaq u leedahay inay xaalkaa liiska iyo saaro wixii faahfaahin ah la xidhiidh mid ahaa.
Go'aanka meesha aad meel liiska gudahood ah index ah qaybaha ganacsiga noqon doonaa mid ikhtiyaar ah oo keliya Bax.
Faahfaahin kale ee shirkadaha / Qolooyinka / wakiilada / dhex-
Haddii aad iibiso ganacsiga ah, fursad maal-gashi ee awooda ah Somailand, wakiilka ama nooc kasta oo kale oo dhex-dhexaadin si aadan iibinta in aad awood shakhsi waa in aad iska diiwaan sida dhexaadin ah website-ka.
Waxaad ballanqaadayso in aad leedahay awood buuxda oo ay ogolaansho ay ku baahiyaan ganacsiga (ama wixii hanti kale oo ganacsi) ama fursad maal-gashi on website ka milkiilaha iyo gaar ahaan in aadan horay u xayaysiiyo shirkad ganacsi (ama wixii hanti kale oo ganacsi) by fudud qaadashada waxaa off ah oo dhex-dhexaadin xisbiga saddexaad ama Somailand oo aan ogolaansho ka haysan mulkiilaha.
Halkee Bax ay wadashaqeyni ka Somailand, wakiilka ama website-yada kale ee adag, Bax dhex- kuwaas siinaysaa ma jirto xuquuqda lahaanshaha si ay u software-ka loo isticmaalo, ama macluumaad posted on boggooda internetka.
Waxaad ogolaatay in aadan koobiyeen doonaa, de-duba-ridida, guuriso ama loo beddelo-injineer software kasta oo loo isticmaalo in lagu websites ka badbaadin ilaa xadka sharcigu ogol yahay. Bax xajisto copyright ee website-kan iyo wixii macluumaad ah ee aan bixino si aad u hesho isticmaalka on your website.
Marka la eego iibsadaha ee
Ka hor inta la xiriiraya iibiyaha ah ee ganacsi iyada oo loo marayo website waa in aad si taxadir leh u akhri Shuruudaha adeegsiga iyo gaar ahaan Afeef iyo sidoo kale shuruudaha soo socda. Haddii aadan ogolayn in aad raacdo by kuwan oo dhan, waa in aad la xidhiidhi iibiyaha ah ee ku saabsan iibka ah ee ganacsiga ah (iyo / ama hanti kasta oo kale oo ganacsi) internetka.
Bax bixisaa website-kan oo aad ku helayso fursad ay ku iibsadaan ganacsatada (iyo / ama hanti kasta oo kale oo ganacsi) adigoo la xiriiraya qof oo ku baahiyaan internetka. Bax ma qaado wixii baaritaan ah ama dadaal ay sabab u geliyey iibsada, iibinaya ama farogelin isticmaala website-kan. Bax adag talo ah in aad dadaal kasta si ay u hubiso iyo xaqiijin dalabyo si shakhsi ah ama iyada oo loo marayo la-taliyeyaasha xirfadeed ama wakiilada sameeyo.
Haddii aad la xiriirtay dhinac saddexaad oo dhex mara isticmaalka website-kan muuqata in aan san-niyad ama kuwa u dhaqmo daacaddarro ah ama si qaldan sinaba, waxaad la xiriiri doonaa Bax ee cinwaanka boostada ama email Wajiigiisa baahinaya faahfaahin buuxda.
Waxaad halkan ku heshiiyaan in ay indemnify Bax ka dhan ah dhamaan sheegashada, shuruudo, falalka, dacwadaha, kharashka, khasaaraha, kharashka ama waxyeelada ka bixiddu laga yaabaa habase oo sababo in si toos ah ama si aan toos ahayn oo sabab u ah isticmaalka website-this.
Bax u baahan tahay bixinta adeegyada, oo ay ku jiraan kaarka deynta, haddii aan si kale loogu sii heshiiyey. Bax kugu soo dallacan doonaa in ginni British Sterling, rubles Ruushka, US Doolar ama Euros, taas oo ku xidhan adeega iyo dalka ay deggan yihiin. Waxaad sidoo kale laga yaabaa inaad bixiso canshuurta degaanka ee lagu dabaqi karo.
Haddii ay dhacdo of default ee isagoo Bax awood farsamo oo dhigaya dheeraad ah ee daabacaadan ee xayaysiinta, iyadoo u dhiganta lacagta si toos ah ula a user kaarka bangiga. user ayaa had iyo jeer waxay leedahay fursad u dami auto-cusboonaysiinta ee aad account on goobta. Si looga fogaado is fahan, iibiyaha waa madaxbannaan ula socdo ku tacaluqa ee xayeysiis oo ku barkinta si dhakhso ah haddii loo baahdo.
Waxaad awoodaa inaad ku dhamaan Times ama joojisid xayaysiinta naftaada, ka dib markii xiriirka la joojiyo in aad xisaabta ama la xiriiraya kooxdayada adeegga macaamiisha via email. Si looga fogaado lagu eedeeyay isticmaalaya adegga ama ujrada advertising bil kasta, Bax waa ineey helaan ogeysiis ka bixida ee aad ka hor maalinta ugu horeysa ee bisha biilasha ama hal toddobaad ka hor taariikhda cusboonaysiinta The Times.
Dhamaan lacag xaq uma soo celiyo. Bogagga internetka iyo xayaysiisyada ee macaamiishu iyo xayeysiiya kuwaas oo joojisay in ay xubin, ama xilliga waa ansax ah ay shishaysa kaararka deynta iyo mana na siiyaan canugeyga on kaarka kale ee biilasha, waa lagala noqon karaa.
Fadlan hubi in aad kaarka lacag bixinta waxaa lagu hayaa ilaa taariikhda. Haddii aan awoodin in ay lacag ka arrinsashada ka kaarkaaga, waxaan ka xumahay in ay lagama maarmaan noqon doona in ay joojiso Times iyo liiska (s) ilaa aad na siiso faahfaahinta kaarka lacag bixinta oo ansax ah. Waxaad tan samayn kartaa adigoo la xiriiraya adeega macaamiisha ama ay la xariirta faahfaahinta kaarka kaydiyo si ammaan ah ee xisaabtaada. Waxaad weli noqon doonaa masuul ka yihiin wixii lacagaha aad u fiican in aan la kulmay markii aad xisaabta ayaa la ganaaxay.
Faahfaahin kale ee wax farogelin / dhex-
Halkee Bax ay wadashaqeyni ka Somailand, wakiilka ama websites-dhexaadin ee, Bax waxaad siinaysaa ma jirto xuquuqda lahaanshaha si ay u software-ka loo isticmaalo ee la xiriirta websites kuwan. Waxaad ogolaatay in aadan koobiyeen doonaa, de-duba-ridida, guuriso ama loo beddelo-injineer software kasta oo loo isticmaalo in lagu websites ka badbaadin ilaa xadka sharcigu ogol yahay. Bax xajisto copyright ee website-kan iyo wixii macluumaad ah ee aan bixino si aad u hesho isticmaalka on your website. Bax sidoo kale xaq u leh inay u isticmaalaan xogta la ururiyey on websites kuwaas si ay u siiyaan dulaaliin, dhex-, wakiilada, dadka iibsada iyo iibiyaha iyo advertiser kale oo kasta ama qof isticmaala laga yaabaa in ay adeeg adeeg advertising ay. Dhammaan ka arrinsashada macluumaadka shakhsiyeed waxaa loo sameeyaa iyadoo la raacayo sharciga ilaalinta macluumaadka. Fadlan akhri Siyaasada u gaarka ah wixii faahfaahin ah ee ururinta iyo adeegsiga xogta shakhsiga ah iyo xuquuqda ay helaan si aad u wixii macluumaad kugu saabsan.
Adiga oo isticmaalaya adeegyada website-ka, aad ogolaato inaad ereyadan.
Bogag muhiim ah
Canshuuraha iyo Adeegyada
Raadi ganacsi fiican si fudud
Kuqoran liiska ARKO
Waxaan xayeysiiska khuseeya.
Waa maxay sababta kaliya ads tayo sare leh u timid?
Iibiso MEHERAD si degdeg ah oo PROFITABLY
Waxaan leenahay ka qeybgalka sare.
Maxaad ganacsi waxaa lagu iibin si degdeg ah halkan?
Gaaraan khubarada BEST
Raadi u dhexdhexaad ah
Brokers. Qareennada. Anchor.
Sameystaa xul sax ah oo ku takhasusay
239+ dalalka kale
Business Asset Exchange | I Click!
Heerarka iyo adeegyada
Add profile in buugga
Raadi khabiir ku ah
Isticmaalka this site ka dhigan aqbalaada ah	Shuruudaha adeegsiga iyo	Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah